Iyadoo Ururka Dhalinyarada Soomaaliyeed ee SYL ee Magaaladda San Diego ee Cariga Mareykanka ay Howlo Baaadanimo ka wadaan Mgaalada Muqdisho gaar aaan Dadka ay Saameysey Dagaalada , Colaadaha iyo Cudurada ayaa Deeg lacageed waxaa ay gaarsiiyeen Haween Goroobo ah oo ku dhibaateysan Magaalada Muqdiho iyo Caruur Agoon ah iyo Haween Deeqdaan Lacageed oo ay iska soo ururiyeen Soomaali iyo Dad Ajnabi ah ayaa...
Reer San Diego ee Cariga Mareykanka ayaa waxay weli wadaan Gargaarkii ay ka wadeen Magaalada Muqdisho oo ay gaarsiinayeen dadka dhibaatada ka soo gaartey Abaaraha , Colaadaha iyo Cudurrada ayaa Deeq isugu jirtay Lacago iyo Daawooyin ayey gaarsiiyeen maanta Bukaanada ku jira Isbitaalka Hooyada iyo Dhalaanka ee Banaadir Deeqdaan kala duwan oo ay soo dhiibeen reer San Diego ayey waxay u so wakiisheen...
Hay’adda isku xirka iyo horumarinta dhallinyarada Soomaaliyeed ee SOYDEN ayaa maanta ku qabatay Muqdisho xaflad lagu maamuusayay maalinta caalamiga ah ee nabadda adduunka, iyadoo xafladdaas ay kasoo qaybgaleen xubno uu ka mid yahay wasiirka wasaaradda dhallinyarada, isboortiga, shaqada, shaqaalaha iyo arrimaha Bulshada xukuumadda Soomaaliya Xafladda ayaa waxaa sidoo kale ka qaybgalay 60-dhallinyaro...
Hay’adda Darul Salam Society Victoria(Australia) oo Deeqdii labaad ka Qaybiyey Magaalada Muqdisho. ————————————————————————————————-Iyadoo weli ay socdaan gurmadka la gaarsiinayao dadka ay saameeyey abaaraha...
Majmuucada Dacwatu-Towxiid oo Deeq ka Timid Jaaliyadda Biljimka Gaarsiiyay Qoysas Tabaaleysan oo ku Dhaqan Magaalada Baydhabo
Qosas gaaraya ilaa iyo 200 oo Qoys,islamarkaana ka mid ah dad ka ay Abaartu saameysay kuna nool gudaha Magaalada Beydhaba ee Gobolka Bay ayaa waxaa la gaarsiiyay Deeq Raashiin ah. Deeqdaan oo ay qeybiyeen Majmuucada Dacwatu-Towxiid ayaa waxaa soo dhiibay Jaaliayadaha Soomaaliyeed ee ku nool dalka Biljimka. Qaar kamid ah dadkii Deeqdaas ay gaartay ayaa waxaa ay sheegeen in ay aad ugu faraxsan yihiin...
Deeqdaan ay iska soo ururiyeen Jamaacadda Masjidka Ibnu Cutyeymiin ee Dalka Ingiriiska gaar haan Xaafadda Leicester ayaa waxay ugu tala galeen in ay kala qeyb qaatan walaalahooda Soomaaliyeed ee dhibaateeysan oo waxyeeleeyeen Abaaraha Dalka ka jira. Qeybinta Deeqdani lacagta ah ayaa waxaa loosoo Wakiishay Sheekh Cabdi wali Muuse in uu gaarsiiyo Dadka dhibaateeysan oo ay Abaaruhu waxyeeleeyeen. Cadad...
Fajiciso iyo yaab bay ku noqotey Shacabka Soomaaliyeed markii Masuuliyiin ka tirsan Hayadaha Gargaarka ee Dalka Turkiga ay u gudbeen Dhulka ay Maamulaan Xarakada Al-Shabaab , waxaana lagu waramey in iyaga oo aan kala tashan Dowladda Federaalka ay boooqdeen Xeroyin ku yaalka Gobolka Shabeeladda Hoose , ka dib ay si aad ah u amaanaan Habka Xarakadda Alshabaab u maamulaan Xerooyinkaas iyo kala dambeynta...
Hay’adda Camuud Foundation oo ah hay’ad Soomaaliyeed oo ka shaqeysa horumarinta waxbarashada iyo caafimaadka waxaana mas’uulka ugu sarreeya hay’addan, Maxamuud Faarax Cigaal oo maanta shir jaraa’id ku qabtay Muqdisho ayaa sheegay inay labadii bilood ee ugu dambeeyay xoogga saareen wax ka qabashada abaaraha dalka ku dhuftay. Mr. Cigaal oo ka yimid dalka Mareykanka, gaar...
Bishii Ramadaan waxay Hay’adda Kafaalo ugu hawl gashay aafadii abaaraha kharash kudhow 1,000,000 kroner (hal malyan oo kroner) waxayna kala shaqaysay qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaliyeed sida maraakiiz, ururo, hay’ado, culumo iyo shakhsiyaad khayrfalayaal ah. Waxaa arinkaan dawr weyn kaciyaaray Culumaa’udiinka Puntland oo go’aansaday inay marsiiyaan sadaqaadkii ay uruuriyeen Hay’adda...
Qeybintan Deeqda Lacagata ah ayaa waxay noqoneeysaa wajigii labaad oo ay ugu tala galeen Gurmadka Abaaraha , Halka ay deeqda wajigeedii koobaad ka qeybiyeen Xiro Barakacayaal oo ku taala Degmada Xamar jajab ee Magaalada Muqdisho. Masuuliyiinta loo soo wakiishay deeqda ayaa waxay sheegeen in ay tahay qeybinta lacagtani wajigii labaad oo ay ka qeybinayaan Xerada Aala-Yaasir ee km50 ee Gobolka Shabeelada...
Hayádda HIRDA oo ka howl-gasha badi dalka somaliya ayaa waxaa ay xerada qaxootiga ee magaalada Doolow Ado ee gobolka Gedo ka bilowday talaal lagu sameynayo carurta qaxootiga ah ee ku jira xeradaasi,kuwaasi oo la sheegay inay da’doodu ay u dhaxeyso 6 bilood ilaa 15 sano iyo hooyooyinka carurtaasi. Xasan Abdi Keynan oo ah Agaasimaha Hayádda HIRDA ee gobolka Gedo ayaa sheegay inay dhamaan carurta...
Hay’adda Access for support & development centre ayaa gargaar kala duwan oo isugu jiray raashin nafaqeysan, raashin caadi ah iyo dawooyin u qaybisay barakacayaasha abaaraha ee ku sugan magaalada Muqdisho. Gargaarkan oo ahaa mid khaas ah oo loogu talogalay caruurta iyo hooyooyinka ay nafaqodarridu hayso, waxaana ka faa’iideystay 800 oo qoys oo ay ku jireen caruur iyo hooyooyin nafaqo-darro...
Deeqdaan ay iska soo ururiyeen Soomaalida degan North America ayaa waxay u soo wakiisheen inuu usoo diro Barakacayaasha Soomaaliyeed Masuulka lagu Magacaabo Aadam Max’ed Ciise oo ku sugan North America. Qeybinta Deeqdani ayaa waxaa loo soo wakiishay Sheekh Cabdi wali Muuse in uu gaarsiiyo Dadka dhibaateeysan oo ay saameeyeen Abaaraha Dalka ka jira. Qadarka lacagata ay iska soo aruriyeen ayaa waxay...
Hay’addaha kala ah Disable Welfare Foundation iyo Save a Life Nederland ayaa si Wadajir ah u wada fuliyeen 3 Mashruuc oo kala ah: 1- Afurin dadka soo 2- Barakacay mudo 10 habeen ah; 3- Zakaatul Fidri la siiyay 200 Qoys oo dadka soo Barakacay ah; 4- Dhar Ciid la siiyay 20 Caruur Agoon ah. Mashaariicdaan ayaa Maalgelisay Hay’adda Save a life oo fadhigeedu yahay Nederland, waxaan fulisay...
Warmaha Sh Aadan Siiro Tuurayaa waa wax ula jeedo leh!
Aanba iraahdo Sh Aadan Siiro anoon Jecleyn inaan wax ka dhimo Xaq ama Sifo uu leeyahay, waxaase iga yaabiyay Dhiiranaantiisa iyo Arxandarada ka muuqata maruu isla jaljaleecinayay Mikarofonka asagoo Ciidda Fidriga Khudbo jeedinayay ama Jimcihii xigay, waxaaa dad badan isweydiinayaan intee Damiirkiisii iyo Diinkiisii iyo Dadnimadiisii ku dhinteen? Arxan darada Intaas la eg miyaa Dad Diin Islaam ku abtirsada...
Iyadoo weli ay socdaan gargaarka la gaarsiinayo dadka ku dhibaateysan Gudaha Dalka Soomaaliya ayaa Deeq lacageed oo ay soo dhiibeen Walaalo Soomaaliyeed oo ku nool Cariga Ingiriiska oo kala ah Yuusuf Garabeey iyo Cismaan Cabdi Xasan Black . Deeqdaas oo gaareysey Saddex Boqol oo Doolar ayaa la gaarsiiyey Caruur Agoon ah oo si aad ah ugu dhibaateysnaa Magaalada Muqdisho waxaana Deeqdaan Gacanta ka...
Hay’adda Humanitarian African Relief Organization (HARO) ayaa waxay deeq gaarsiisay Tuulada Madax Waraabe oo ka tirsanTtuulooyinka Degmada Xuddur ee Gobolka Bakool Dadka Tuulada ku nool cadadkooda waxaan lagu qiyaasi karaa ilaa 200 Qoys intooda badan waxay ahaayeen dad Xoola Dhaqato ah balse ay si ba’ani Abaari ugu dhufatay waxaa ka dhamaaday dhamaan xoolihii, Runtii waa dad ay daruufi...
Gudiga Culimada iyo Ganacsatada Gurmadka Degdega ah oo qeybiyay Deeq lacag ah oo ka soo gaartay qaar ka mid ah Soomaalida ku Dhaqan Dalka Newsland.
Gudiga Culimada iyo Ganacsatada Gurmadka Degdega ah oo qeybiyay Deeq lacag ah oo ka soo gaartay qaar ka mid ah Soomaalida ku Dhaqan Dalka Newsland. Deeqdaan ay Gudiga Culimada iyo Ganacsatada Gurmadka Deg dega ay qeybiyeen ayaa waxaa soo gaarsiisay Gabadha lagu Magacaabo Farxiyo Awbaari taasoo Cadadkeeda Gaarayay $4,000 (Afar kun oo Doolar ah ) ayadoo horay Gudiga u soo Gaarsiisay $1,000 (kun Doolar...